Iyo koni yakanyanyisa kuoma kupfuura iyo graphical chirongwa | Linux Vakapindwa muropa
Izvi zvinoenda kure uye neimwe nzira kana imwe isu takambobata nazvo zvisati zvaitika, asi ndinouya nazvo izvozvi sezvo Mark Shuttleworth akamubvunza uye ari iye anobatsira weiyo huru desktop distro, zvinoratidza kuti GNU / Linux iri kuvandudzwa mune nzira huru. kuyerwa nevanhu vasingazive nezvekushandisa.
Ok, koni yacho yakanaka kwazvo uye inobatsira, asi vanhu vazhinji vanofanirwa kushandisa graphical interfaces nekuti hunyanzvi hwavo hwemakomputa hushoma, havazi vese vanoda kudzidza kushandisa chimwe chinhu chisina kukodzera uye havafanirwe kudaro.
Kune rimwe divi, GUI haingoreve nyore kana nyore, kunyangwe GUI (kana graphical) zvinoshandiswa zvinoda dhizaini yakakodzera kuti ive nyore nyore kudzidza kushandisa.
Chinhu icho vashandisi veLinux vanofanirwa kumira kufunga nezvacho ndechekuti mushandisi mutsva anofanirwa kudzidza zvakanyanya kuomarara. Chinhu chimwe chete, iyo koni haina kuoma uye ini handina kutaura kuti ndizvo, asi haife yakanzwisisika, hapana munhu anogona kufungidzira mashandisiro echirongwa chekuraira nekutarisa pachiratidziri, chirongwa chekunyora cheDVD (kupa muenzaniso weGUI) hongu, uye ndiwo mutsauko usingakundike pakati peGUI uye chirongwa chemutsetse wemirairo.
Izvo zviri pamusoro zvinogona kutaridzika kunge zvisinganzwisisike kwauri, mushandisi weLinux wepasina pasi pemakore maviri, asi fungidziro yekuti koni inogadzira inosimba kune mushandisi wekutanga uyo akamboshandisa Linux uye kwete MSDOS.
Zvinorevei kuziva kuti ini ndichafanirwa kushandisa tambo yekuraira kekutanga?
Zviri nyore. Kana iwe ukaona koni kekutanga uye woona kuti muLinux zvinosungirwa kuishandisa kunyangwe kamwe chete pamwedzi, izvi zvinouya mupfungwa dzako: FUNGA!
Hapana munhu anofarira kubata nemusoro uye, kunyangwe vashandisi veLinux vachiziva kuti haina kuomarara zvachose, asi izvi zvakatitungamira kuita. Ndinoyeuka kuti pandakanga ndichidzidza kuInstitute taifanira kudzidza kushandisa MSDOS yekomputa yesainzi kirasi uye ndichiri kurangarira kuti iye ega aiziva kupinda nekushandisa mirairo (apo ini ndanga ndisiri kushandisa Linux zvakadaro) aive ini, vamwe vese vakandibvunza kuti ndozviita sei.zvakabvunzwa uye hapana munhu akadzidza MSDOS zvakanyatso.
Chinhu chechipiri chaunofunga nezvacho kana iwe ukaona yekuraira tambo kekutanga ndeye: KUBORA!
Nekudaro, kushandiswa kweiyi inoshanda sisitimu padanho redesktop hakugone kukurudzirwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Musiyano usingakundike pakati pekushandisa graphical uye koni
Sergio Rondan akadaro
Pese pandinogona, ini ndichiedza kuita kuti vanhu vashandise koni, chishandiso chinoshanda uye chinoshanda, icho chinoshandawo zvakafanana mune yega yega distro!
Pindura Sergio Rondan
Ndizvozvo chaizvo. Zvigadzirwa zvinofanirwa kunge zvakagadzirirwa vashandisi. Kune avo vanosarudza kuraira tambo yezvinhu zvese, ivo vanogona kutora distro inoenderana navo. Ini ndinoda koni, asi yakanaka GUI inogona kurerutsa zvinhu zvakanyanya uye inogona kuchengetedza yakawanda nguva yakarasika mukudzidza izvo zvisina kukosha kune 99,9% yevanhu. Sezvo ini ndagara ndichitaura, kune vazhinji vedu OS hausi mugumo, asi ingori chiridzwa.
Mavhiki mashoma apfuura ini ndaifanira kuona chimwe chinhu chakafanana nedzimwe shamwari. Dambudziko rakamuka apo mumwe wavo paakataura kuti Linux haina kujeka. Saka, ndinokubvunza, nei uchitaura zvakadaro? Kumwe kwekushoropodzwa kwaive kwekuti pavanoisa mapurogiramu havaoneke mumenu (chimwe chinhu chandisingakwanise kuramba, sezvo kumwe kunyorera kuri "kusanzwisisika"), asi mushure meizvozvo, fungidziro dzinofungidzirwa dzakadzikira zvakanyanya.
Zvino ini ndinoti, ndichitora kubva pane zvinyorwa: «… vanhu vazhinji vanofanirwa kushandisa graphical interfaces nekuti hunyanzvi hwavo hwemakomputa hushoma…» Dambudziko nderekufananidza nzvimbo kana ivo vasingatombozive kuvhura PC? Huya, kana Windows yanga isiri OS, waifanirwa kushandisa MSDOS uye hapana munhu akanyunyuta.
Asi zvakanaka, nguva dzinoshanduka, webhu 2.0, masocial network, nguva = mari, kuwanikwa, nezvimwe. Saka, sezvo maGII achichengetedza hupenyu, chero munhu anoisa chirongwa checomputer-chakabatsira kudhirowa (CAD) anokwanisa kugadzira zvirongwa pasina matambudziko, kana aine GUI, Nhema! Hongu kana hongu, iwe unofanirwa kudzidza uye kuramba uchichinja kuti uchinje, (iyo Linux yakagamuchira, sezvo iwe uchiona akawanda mapurogiramu ane akanaka kwazvo uye ari nyore kushandisa maGUI), asi nei iye agere kuseri kweLinux akadzidza ? Chiremba havafanirwe kudzidza here? Kana Injiniya haifanire kunge yakanyatsoita muzviito zvake? Zvese zvinoenda muvanhu. Iyo console HAIYE DZIMWE DZIMWE, pane zvinopesana, inopa zvakawanda zvivakwa kupfuura chirongwa chinoita zvese zvisina bofu, kana iwe ukavhura icho chirongwa ukasatanga, unoitei? ... mukunyaradza, yakawanda yenguva iyo inokuudza kuti zvinokundikana. Zvakanaka, hongu kana hongu, iwe unofanirwa kuziva kushomeka kwekushandisa kweiyo koni, asi icho chinhu chatakagadzira panguva yekushandisa iyi OS. Pandakatanga (zvakanyanya kana kushomeka munaJune 2007) ini ndaisatomboziva kuti yaive sudo, kushoma maitiro ekuisa chimwe chinhu kubva kumatura uye ndisingatombotauri kunyora sosi ... asi chishuwo chakapfuura izvo zvausingakwanise.
Ndokusaka ini ndaneta, kare, yemibvunzo inogara ichitungamira ichipesana neGNU / Linux. Tine Ubuntu, distro irikuita zvinhu zvine mutsindo, kushandiswa kweconsole kwakadzikiswa, panenge pasina mavara machena anoonekwa pane akasviba matema (iyo splash inogara inokwana mushe), vane Synaptic uye zvimwe zvinoshandiswa zvinokuchengetedza nguva. Iyo console inogara iri uye (Ndinovimba) inogara iri. Linux ndeyevanhu vanoda kuzvinetsa uye nekumisikidza zvinangwa, kuva mukugara uchidzidza, vanhu vasingagare pamapani ane maruva akanaka, kana vasiri vanhu vanotarisana nesango, nekuti ivo vanoziva kuti mukati maro mune maruva akawanda. .
Ini handizive kana ini ndaigona kuvhara rangu zano mushe, kuti pamwe ndakaenda zvakare musango ndikatakurwa neangu ego, kazhinji yenguva. Asi sekutaura kwekupedzisira, muLinux iwe unofanirwa kudzidza, kana usingaide ... tsvaga yako!
Izvi ndizvo chaizvo zvandiri kureva: rako basa, basa kana zvaunoita. Zviripachena iwe unofanirwa kubata iyo koni zvakanyatsonaka nekuti basa rako rinorida, asi pane nyonganiso kana uchifunga kuti ese "mabasa" anoitwa nechero distro yakafanana neayo ehurongwa maneja. Basa rangu harinei nechekuita nekomputa, uye ini ndakasarudza GNU / Linux nekuti zvinondipa kugadzikana, chengetedzo, uye imwe mhando isingaverengeke yesoftware iyo inovandudza chigadzirwa changu. Ini ndinofunga zvakafanira kwazvo kupatsanura zvinodiwa pakudzidza yehurongwa hwekushanda pakati pevatungamiriri (uchishandisa izwi iri zvakanyanya) nevashandisi.
Isu hatifanirwe hazvo kuva sysadmin kushandisa koni uye ini ndinodzokera kune rubatsiro rwandinopa kune mushandisi weforamu. Haana kukwanisa kuisa vatyairi veAti. Iyo wizard yakabuda iri graphic mode, ese akanaka kwazvo asi haina kuisa. Zviripo chikonzero, zvaisazivikanwa, nekuti pakange pasina mhosho meseji. Kutaurisa kwangu kwaive, kuita zvese nekonisikopo (yaimboratidza zvekuita) mhedzisiro, mushandisi anofara kuve nemifananidzo yekumhanyisa ... nekuda kweconsole uye akati mushandisi haasi iye ane ruzivo kupfuura vese. Iyo koni yakanyanyisa kukosha. Iyo haigone kuchinjirwa kune yakachena graphical mode, iyo mystique yeLinux yaizorasika. Pamwe a balance Console: GUI ... asi ini handizive kusvika pamwero wakadii.
Giorgio grappa akadaro
Zvinyorwa, kutanga na "Ok, koni yacho yakanaka kwazvo uye inobatsira ..." huya nhatu dzendima dzakangwara dzandakaverenga munguva yakareba panharo iyi.
Ini ndaizowedzera kuti komputa haisi chishandiso chakareruka zvachose, uye kuti avo vanoti zviri nyore kushandisa vanonyepa semachira kuti vawedzere kutengesa kwavo.
Izvo zvinoitika ndezvekuti mushandisi wekumba haana system mutariri padhuze naye kana chimwe chinhu chisingashande, uyezve asiri iye fan anofarira wekuverenga zvinyorwa.
Uye rimwe rematambudziko makuru "ekushambadzira" eGNU / Linux ndiyo nhamba yevashandisi vanowana iyo console ichinyanyisa kuseka: hatizive kuti isu hatisi chikamu cheyakajairwa uye isu hatinzwisise kuti mumwe munhu anogona kutya skrini nhema, saka akanyorovera iye, anoteerera uye anobatsira zvakanyanya.
Pindura Giorgio Grappa
Kune vese vamiriri veGUI: Ndinoda kukuona iwe zuva iro mudiwa wako GUI asingamuke kuti aite zvawaimboita pakadzvanya mbeva; kana zvakatoipisisa: zuva iro grafiki nharaunda yako isingasimudze. Usakanganwa kuti maviri eesimba anoshanda masisitimu epasi (UNIX uye Solaris) haabatwe nekungobaya mbeva. Inguva yekuparadza injini inotyaira kukura kweupenzi hwevanhu: kusaziva; uyu wanga uri mupiro wangu mudiki kuchikonzero.
Ndinoda kukuona uchichinja TV yako pasina remote control, uchiita kuonana mudunhu remuchina. Ngatiregei kuomarara, chero munhu anoda kudzidza kudzidza, uyo anongoda kuti igadzikane, kuishandisa. Havasi vese masayendisiti emakomputa, asi zvinoita sekunge vazhinji vakadzikisa kudiwa kwekushandura nyika ive console. Ini handichengetedze sevha kana chero chinhu chakadai. Kana iyo graphical server ikapunzika ndine sarudzo yekutangazve, yakapusa (kunyange zvisati zvamboitika kwandiri). Chii chamuri kuita mese pamberi pePC? Kuwana maoko padenga zuva rese? Mhanya zvirongwa zvakawandisa zveconsoon? Ini ndinoshanda pamwe neLinux yangu.
... Kana iyo graphic server ikapunzika ndine sarudzo yekutangazve, yakapusa (kunyangwe isina kumboitika kwandiri). Chii chamuri kuita mese pamberi pePC? Kuwana maoko padenga zuva rese? Mhanya zvirongwa zvakawandisa zveconsoon? Ini ndinoshanda pamwe neLinux yangu.
Nekuda kwemhinduro yako yaunofungidzirwa kune graphical server kutadza, zvinoratidza kuti hazvina kumboitika kwauri uye kuti wakabva mukushandisa isingashande system yandisingafarire kutaura nezvayo; Ndinoyemura iwe pachako: unoshanda neLinux (inova kernel) uye kwete pakoni. Kana ndiri ini, ini ndinoshanda nema distros akati wandei eiyo GNU / Linux inoshanda system, mune server nenzvimbo dzekushandira (munzvimbo dzenyama uye dzakagadziriswa) ... uye kwete, ini handifanirwe kuisa maoko angu pane kernel zuva rese, kana kumhanyisa zvirongwa zvakawandisa zuva rese; Ini ndinoshandisa GUI uye WebGUI kune mamwe mabasa (pandinoona zvichidikanwa), asi ini handisi-GUI-ndinovimba.
Izvi ndizvo chaizvo zvandiri kureva: rako basa, basa kana zvaunoita. Zviripachena iwe unofanirwa kubata iyo koni zvakanyatsonaka nekuti basa rako rinorida, asi pane nyonganiso kana uchifunga kuti ese "mabasa" anoitwa nechero distro akafanana neayo ehurongwa maneja. Basa rangu harinei nechekuita nekomputa, uye ini ndakasarudza GNU / Linux nekuti zvinondipa kugadzikana, chengetedzo, uye nemhando dzakasiyana dzesoftware dzinovandudza kugadzirwa kwangu. Ini ndinofunga zvakafanira kwazvo kupatsanura zvinodiwa pakudzidza yehurongwa hwekushanda pakati pevatungamiriri (uchishandisa izwi iri zvakanyanya) nevashandisi.
Kune redundancy pane iyi nyaya. Parizvino handikwanise kumira kudivi rega, ini ndinoshandisa iyo koni yezvinhu zvandiri kuda kune iyo koni, uye ndinoshandisa maGUI neWebhu-GUI pazvinhu zvakafanirwa nazvo.
Ini ndinobvuma kuti koni haifanire kubviswa chero chikonzero, asi ini handizvidze yakanaka GUI inoita kuti basa riwonekwe nyore, kunyangwe iro rakakurumbira GUI application ye "pinging" iyo yakakurukurwa zvakanyanya mune imwe posvo (chinyorwa: aiwa ndiyo chinhu chete chinoita).
Muchidimbu, chinhu chakakosha ndechekuti tenda Mwari, uye kunyangwe paine hurukuro zhinji, unogara uine sarudzo yekusarudza koni kana yako GUI application.
PS: Zvingave zvinonakidza kukuona uchiedza kugadzira gwaro reODF, yemahara uye inogamuchirwa yakajairika, pane koni.
Ehezve, yega yega interface kune chaiwo vashandisi uye / kana zvinangwa. Iyo GUI yakanakira kwazvo vashandisi vemberi uye vasiri vemberi, kusefa internet, kuverenga tsamba, kuridza mimhanzi, nezvimwe
Nekudaro, yekumisikidza uye manejimendi mune dzakawanda kesi iyo koni ine simba rakanyanya kupfuura iyo GUI. Uye nezve izvo zvavakataura kuti iwe unofanirwa kubata nemusoro mirairo, hachisi chokwadi. Iwe unodzidza mirairo yakawanda kubva mukushandisa kwavo. Uye avo vasingadaro, vhura kuInternet kana kumapeji emawoko (pandanga ndichidzidza degree racho ndakanga ndisina ruzivo rwese rwuripo paInternet uye ndaifanirwa kutarisa pamapeji emabhuku nemabhuku kuti ndiite zviitwa).
semurume mukuru akachenjera akati… mamiriro enzvimbo akakosha…. kuva nezvimwe zvinonyaradza ...
Ini ndinotsigira chinyorwa, ini ndiri mudzidzi wepakomputa, ndinoshandisa Debian uye ini ndinoshandisa Arch uye Slackware nguva nenguva. Zvakandinakira, ini rimwe zuva ndinogona kurarama ndichibuda paconsole, maneja we server, nezvimwe. Asi, Archaeologist, Chiremba, Akapedza kudzidza, haana chikonzero chekudzidza zvakakwana mirairo kana kuve nechengetedzo izere yepc kana achingofarira kuita zvakakosha mabasa.
Pindura kune dhadha
alexander maldonado quintana akadaro
Munhu wese anoziva uko shangu inosvinira. Ndiri kungoziva GNU / LINUX kutama kubva kuWindows. Kunyangwe ini ndakashanda nevaviri pakutanga uye iwe waive nemutsetse wako wekuraira, haufanire kuti udzidze mirairo yese kana uri mushandisi, nekudaro nzvimbo dzemifananidzo dzakachengetedza hupenyu hwevakawanda vedu kuti tirege kuratidza madhimoni enzvimbo / o inonyaradza zvirinani funga kuti zvese zvinowedzera.
Pindura kuna alexander maldonado quintana
nechikonzero Windows inobata 90% yePC desktop pasi uye kune chimwe chinhu linux chinotora 90% yemaseva, Windows iri nyore uye Linux yakati simbei uye nekuda kwechikonzero icho inoda zvishoma graphical interface iyo inogona kuunza makakatanwa muzvirongwa. yakakosha iyo isingatsamiri pairi.
Kune yangu chikamu ndinozvipira zvakanyanya kuWindows uye kuti basa rangu rinorida uye ini ndinogadzira mari yakawanda neiyi sisitimu yekushandisa, Linux inoitora nguva nenguva sekuvaraidzwa. Muchidimbu, zviri nyore kwandiri kuti ndishande zvakanyanya nema windows nekuti ndipo pandine basa rakawanda nekuda kwenhamba hombe yevashandisi vanoishandisa.
Richard M. Stallman muMar del Plata: pane kuiswa kwedhijitari